Madagascar Matin » Antsevabe didy – Olona 1 maty voatifitra, roa hafa naratra
Ao anatin’ny toerana malaza misy ny kariera amin’izao fotoana izao raha ny ao Didy izay nahitana fanafihan-jiolahy mahery vaika ny alin’ny talata 22 hifoha ny alarobia 23 febroary 2017 lasa teo. Tokantrano iray no lasibatra tamin’izany tao amin’ny zana-bohitra iray antsoina hoe Andakazera ao Antsevabe Didy. Maty vokatr’izany ny olona iray raha voakapoka mafy teo amin’ny lohany kosa ny rainy ary voatifitra teo amin’ny sorony kosa ilay ramatoa reniny. Samy mbola manaraka ny fitsaboana sahaza azy ao amin’ny hopitaliben’Ambatondrazaka izy roa ireo amin’izao fotoana izao ary efa mandeha ihany koa ny fanadihadiana lalina ataon’ny tompon’andraikitra mahakasika ity toe-draharaha ity. Mampihorohoro tanteraka ny vahoaka ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay nivaivay tanteraka tato ho ato tao anatin’ny faritra Alaotra Mangoro ka ilana ny fandraisana andraikitry ny mpitondra isan’ambaratongany.
Ange R .